HomeWararka MaantaSirta Guulaha Chelsea Oo La Shaaciyey iyo U Diyaar-garowga Mananchester United
Sirta ka dambaysa guulaha Chelsea ka gaadhay horyaalka dalkeeda xili ciyaareedkan ayaa la soo bandhigay, waxaana laga soo qaaday sawirro muujinaya tababar ka duwan kuwa ay kooxaha kale sameeyaan wakhti ay ku sugnaayeen qol u gaar ah tababarka.
Chelsea oo isku diyaarinaysa ciyaarta ay Sabtida garoonkeeda ku qaabili doonto Manchester United ayaa waxa laga qaaday muuqaallo ay baahiyeen warbaahinta ciyaaraha, kuwaas oo muujiyey tababar culus oo jidh dhis ah oo ay sameeyaan ciyaartooyada Chelsea.
Tababare Jose Mourinho ayaan fursado ay ku nastaan siinin ciyaartooyadiisa, waxaanu u diray dhamaantood xarunta jidh dhiska ee kooxda, iyagoo loogu xidhay qalab qoraya qof walba inta jeer ee uu sameeyey tababarka.
Eden Hazard, Nemanja Matic iyo Kurt Zouma ayaa wakhtigooda ku qaatay tababar culus oo ahaa in iyaga oo biro culus sida ay ordaan, xadhko caloosha kaga xidhan inay isku dayaan inay ordaan iyo waxyaabo kale.
Carlo Lalin oo ah ku-xigeenka tababaraha Chelsea ayaa waxa uu sheegay in tababarkan jidh dhiska ah ee ay kooxdiisu samaysay ay tahay mid ciyaartooyada ka caawinaya fayo-qabkooda iyo sidii ay ciyaar ahaan adkaysi ugu yeelan lahaayeen.
Sawirro: Juventus Oo Gaadhay Cardiff
Daawo Pedro Oo Durba Tababarka La Bilaabay Chelsea